News & Events | MGEI Gratis Education Institute Manawramma Gratis Education Institute
(+95) 1 245 660
Thai, Korean & German Course
TOMU Group နှင့် အဲရင်းအဖွဲ့
ဒီနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့(Tomu Class) ဆိုတဲ့အဖွဲ့အဲရင်းတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့လာရောက်ခြင်းဟာလည်း ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်ကလည်းလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Tomu အဖွဲ့နဲ့အဲရင်းတို့ စကားလက်ဆုံကြသွားတာ ည ၉နာရီနီးပါးအထိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလာရောက်တဲ့ Tomu အဖွဲ့မှာစုစုပေါင်း (၈)ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က… Read More
Baho Road, San Chaung, Front of New Day Petrol, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
(+95) 9-771 166 320, (+95) 9-456423835
Copyright © Manawramma Gratis Educational Institute. All rights reserved.
Designed & Developed by Aquarius Tech Myanmar